Aniga oo doorasho geli kara dadka abaartu heyso waa yeel kadood by Abdi Mustafe
Wax badan baa Muse Biixi hadalo iyo ficilo qalafsan laga sheegay hase yeeshee maanta ayuu isku mar-khaati furay markuu leeyey aniga oo doorasho geli kara dadka abaartu heyso waa yeel kadood. Muse wuxuu hore u falay oo dhan hadii laga dhaafo tan maanta maaha mid noloshiisa oo dhan ka hadhi doonta. Mid ka mid abwaanada maanta Hargiesa baaqa ka soo saaray ayaa mid wuxuu keenay sheeko Muse Biixi ku qotonta oo ah: Wiil iyo Gabadh reer miyi ah oo rabay inay is guur-sadaan ayaa abaari ku timi.
Dabeed way ka xishoodeen inay is aroostaan oo wiilkii ayaa heesay oo yidhi: Naa geelaan xerinayaa, adna adhiga xeeb geeyoo, xays-keynnu leenay. Horta caqliga Muse inaasaa inagaga filan aannu ummada abaartu hesay ka xishoonin, ujeeda diisuna tahay inta abaarta lagu jiro ka gaadhsii doorasho uu is leeyey waad ku guuley-sanaysaa ha la qabto. Sida ay wax u socdaan hadii xitaa tiisa la raaco oo doorashada xiligeeda lagu qabto Muse wuu guul-daraysanayaa oo gobol uu cod aqlibiyada ka helayaa ma jiro. Maanta uun buu si fiican isu gowracay oo caruur iyo ciroole ba ogaadeen in aan Muse wax jira ahayn ee uu yhay majnuun falan oo ku khafiifay mar uun madaxweyne i dhaha. Cid aan Muse Biixi ahayn oo doonaysa in doorasho la qabtaa xiligan abaartu xoolihii iyo dadkiiba aafaysay ma jirto. Isku soo xoori oo halkaa ayuu Muse shicibka cod kaga waayay ee kola quusan maayo ee ha loogu dhaarto in aan cidi dooranayn.
More in this category: « Libaaxley waa Baabul mandabka isgaadhsiinta S/Land + Somalia waxbase uguma fila Deg.Boon ee libaaxley ka tarisantahay. Dr.khadar-Libaaxley. MADAX-BANNAANIDA SAXAAFADDA IYO MAS'UULIYADDA SAARAN BY Cali Xaruuri »